'Day of the Tentacle Remastered' သည် Mac App Store သို့ဝင်ရောက်သည် ငါက Mac ပါ
'Day of the Tentacle Remastered' သည် Mac App Store သို့ဝင်ရောက်သည်
'တဲတော်နေ့သည်အသစ်ပြုပြင်ခြင်း' မတ်လ ၂၆ ရက်က Mac အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဂိမ်းထဲမှာ ဒေါက်တာ Fred, ခရမ်းရောင် mutant tentacle သည်ကမ္ဘာကြီးကိုသိမ်းပိုက်တော့မည်, သာသူ့ကိုသင်ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။ မူလကဂိမ်းအားဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည် LucasArts, အဲဒီမှာအဘို့ 1993 Maniac Mansion မှ Ron Gilbert နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်၊ ဂိမ်းတွင်သင်ကစားလိမ့်မည် အချိန်အတွက်ခရီးသွားလာများစွာသောနှင့်အတူကာတွန်း စကားတာ နှင့်အဆွေသုံးယောက်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရသောစွန့်စားမှုဂိမ်းကမ္ဘာပေါ်မှာယူကနေမကောင်းသော mutated တဲတော် (ဒေါက်တာ Fred သည်) တားဆီးဖို့။ ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့တစ် ဦး ထားခဲ့ပါ ဗီဒီယိုက.
နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာပြီးနောက် 'တဲတော်နေ့' သည်ပြန်လည်ပတ်လာသည် remastered ထုတ်ဝေ အသစ်သောအရာများစွာရှိသည်။ မြင့်မားသော resolution ကိုလက်ရေးဆွဲသရုပ်ဖော်ပုံများနှင့် remastered အသံ, အသစ်သောဂီတနှင့်အသံသက်ရောက်မှု (အရာ 90 ကနေဝေဖန်သူများကအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည် ထူးထူးဆန်းဆန်း!).
ကစားသမားများနိုင်ကြသည် ဂန္ Modes သာအကြား switch သည် သင်၏အလိုဆန္ဒဟောင်းသို့သင်၏ဟောင်းသောအသံ၊ ဂရပ်ဖစ်နှင့်အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ဖြင့်ပြန်သွားပါ။ ဂိမ်း၏မူလဖန်တီးသူများဖြစ်သော Tim Schafer၊ Dave Grossman၊ Larry Ahern၊ Peter Chan၊ Peter McConnell နှင့် Clint Bajakian တို့မှအယူအဆအနုပညာပါသည့်ဘရောက်ဇာလည်းပါရှိသည်။
'တဲတော်နေ့' ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးဂိမ်းဖြစ်ခဲ့သည် Tim schaferနှင့်ကတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် ကောင်းတဲ့အစွန်းရောက်ဂိမ်း။ ဒီအထူးထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပွနျလညျထူထောငျ ဂိမ်းကိုမူလဖန်တီးသူများမှသာရရှိနိုင်သောဂရုပြုမှုဖြင့်ဂရုတစိုက်ပြန်လည်ပြုပြင်ပါ။
တင်ပါတယ်: 26/03/2016 ။
ဂိမ်းကိုဝယ်ပါ 'တဲတော်နေ့သည်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းခံရ ' သာ € 14,99 အောက်ပါ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် Mac App Store မှတိုက်ရိုက်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » 'Day of the Tentacle Remastered' သည် Mac App Store သို့ဝင်ရောက်သည်
ငါထင်တာကတော့သူတို့ကဒီဂိမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ mac တွင်ထပ်မံကစားနိုင်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းသော်လည်းပြproblemနာမှာစပိန်ဘာသာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သနား။
€ 15 …ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် hahahahahaha
Safari မှမျက်နှာပြင်အပြည့် toolbar ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို